Ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny lafin’ny fiainantsika dia tsy hita misongadina avy hatrany indray mandeha fa arakaraka ny handrosoana no ahitana izany.
Rehefa manaiky sy mankato hatrany ny sitrapon’Andriamanitra isika dia atorony antsika izany. Na misy aza ireo fanontaniana tsy ahitana valiny izay tsy midika akory fa hoe manafina ny sitrapony Andriamanitra fa rehefa mitranga kosa ny toe-javatra iray dia tokony hahay hisafidy sy handray fanampaha-kevitra izay araka ny Soratra Masina izaho sy ianao. Izaho sy ianao dia manana ny zavatra kendrena matoa manantanteraka ny sitrapon’Andriamanitra fa Izy koa dia mikendry ny mahasoa antsika koa amin’izany fahafantarana ny sitrapony izany eo amin’ny fiainantsika.
Inona ny zavatra kendren’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao izay niova fo aloha ?
1/ Fikatsahana ny fanjakan’Andriamanitra
Izany hoe ny kendren’Andriamanitra aminao sy amiko aloha dia ny fikatsahana mihintsy ny fanjakan’Andriamanitra aloha (ao anatiko sy eo amin’ny fiainako andavan’andro).
Ao anatin’ny fanjakan’Andriamanitra no misy ny sitrapon’Andriamanitra.
2/ Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao, tiava ny namanao
Matio 22 :37-39 « Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an’ i Jehovah Andriamanitrao amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra[Deo. 6. 5].Izany no didy lehibe sady voalohany.Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »[Lev. 19. 18]
Ny kendren’Andriamanitra koa amiko sy aminao dia ho tia an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana.
Betsaka isika no mikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra ihany fa mety ho teren’ny zava-misy.
1korintiana 8 :3 « Fa raha misy tia an’ Andriamanitra, dia izy no fantany »
Ary marina ny voalazan’Andriamanitra rehefa tena hoe tia an’Andriamanitra isika manao hoe
1Jaona 5 :1 « Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’ Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa »
Izany hoe afaka hitia izay rehetra tafiditra ao anatin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao.
3/ Ny fahamasinana
1 Petera 1 :15 « fa araka ny fahamasinan’ ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa hianareo amin’ ny fitondran-tena rehetra »
Mikendry antsika mpino Andriamanitra mba handeha amin’izany fahamasinana izany
4/ Hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy kristy Tompo
Izaho sy ianao ve mba tena mitombo sy fahalalana an’i Jesosy Kristy tokoa marina?
Mila mitandrina isika fa ny devoly anie mba mahafantatra ihany ny sitrapon’Andriamanitra fa izy tsy mankato izany ary tsy tia an’Andriamanitra.
Isika kosa izay navotana rehefa nandray famonjena ianao ka milaza fa kristiana dia mandehana amin’ny sitrapon’Andriamanitra ary mahafantara izany.
Betsaka ny olona izay milaza fa te hahalala ny sitrapon’Andriamanitra fa milaza fa tsy mazava mihintsy izany, ary ny olona tsy tafiditra ao anaty fanjakan’Andriamanitra dia tsy hahalala mihintsy izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Inona àry ny anton’izany tsy fahalalana ny sitrapon’Andriamanitra izany ? moa ve Izy tsy te ampahafantatra antsika izany ?
Tokony ho fantatsika fa Andriamanitra dia mijery tsara ny ao anatin’ny fon’ny olona tsirairay, nisy ireo olona izay niaina sy niaraka tamin’i Jesosy Kristy niatsara velatsihy fa manontany an’i Jesosy, ny anton’izany dia ny mba hamandriany Azy. Ary fantatr’i Jesosy tsara izany.
Ny fanirinao izany no jeren’Andriamanitra voalohany, hafa mantsy ny tena hoe maniry ao anatin’ny fo fa tsy teren-javatra ka hanao hoe « inona àry ny sitrapon’Andriamanitra fa ataoko »
Izany izaho sy ianao mba hanana hetaheta tahaka an’i Davida
Salamo 40 :7-8 « Dia hoy izaho:inty aho tonga ao amin’ ny horonam-boky no nanoratana ahy.Ny hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô, no sitrako; ary ny lalanao no ato anatiko »
Oviana Andriamanitra no manoro ny olona ny sitrapony ?
Davida izany dia naminany io teny io ary tanteraka tamin’ny andron’i Jesosy Kristy io, hitan’Andriamanitra mihintsy izany ity fanirin’i Davida ity hoe tena te hanao ny sitrapony tokoa sy tena ao anatiny tokoa ny lalàny ary izay Andriamanitra vao manoro ny olona ny sitrapony.
Jaona 7 :17-18 « Raha misy olona ta-hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin’ ny fampianarana izy, na avy amin’ Andriamanitra izany, na miteny ho Ahy Aho »Jesosy izany dia miteny mihintsy hoe raha vao misy olona maniry ary mikatsaka aveo hanao ny sitrapon’Andriamanitra dia mahalala izy aveo.
Ireny fampianaran-diso izay henontsika hafa ireny izany raha tena mikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra isika dia ampahafantarin’ny Fanahy Masina antsika hoe « diso izany teny izany, marina izany, hevitr’olona izany toriteny izany… »
Andriamanitra dia mijery ny fanirinao mihintsy izany ary tsy mihaino fotsiny fa tena manao izany sitrapony izany ary tsy ho diso lalana mihintsy ianao amin’ny fanarahana ny sitrapony izany.
Salamo 25 :4-5 « Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho.Tariho amin’ ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro »
Mbola i Davida no nanoratra an’io salamo io ary dia izay mihintsy ny azy hoe « Ianao no andrasako mandritry ny andro
Rehefa tafiditra tokoa ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny olona iray antsoina hoe zaza ara-panahy dia efa misy hetaheta betsaka ao anatiny ao hoe « inona re ny sitrapon’Andriamanitra ? » hafa mihintsy izany satria efa fo sy fanahy vaovao no nataon’Andriamanitra tao anatin’io olona io ary efa mangetaheta sahady hanantanteraka ny sitrapon’Andriamanitra eny amin’ny fiainany eny. Ny zaza ara-panahy dia manana izany daholo fa indraindray rehefa varimbariana eny ny olona mety hiasa indray ny fihevitrin’ny nofo fa isika kosa
Salamo 119 :105 « Fanilon’ ny tongotro Sy fanazavana ny làlako ny teninao »
Izany hoe hoazavain’io Tenin’Andriamanitra io. Betsaka ireo olona mahalala tsianjery ny sitrapon’Andriamanitra fa tsy mahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra izay miankina voalohany amin’ny faniriana hanao ny sitrapony.
Ity izany dia tsy mitovy amin’ny fahendren’olombelona manao hoe « aleo aloha no fantatro mihintsy izay aho vao hanao ! »
Fa ny an’Andriamanitra dia hoe : iza no manam-pikasana te hanao ny sitrapon’Andriamanitra ? de aveo anjaran’Andriamanitra ny tohiny. Rehefa tafiditra ao anatintsika izay faniriana te hanao ny sitrapony dia manome saina sy manoro hevitra amin’izay Izy
Salamo 32 :8 « Hanome saina anao sy hampianatra anao izay làlan-kalehanao Aho; Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao Aho »
Tsy mijanona amin’izay akory Andriamanitra fa misy ny sitrapon’Andriamanitra izay tsy hefantsika amin’ny ara-nofontsika amin’izao fa ilaina ny herin’Andriamanitra ary ilaina ny tari-dalan’Andriamanitra. Ary fantaro fa ny devoly dia tsy faly mihintsy hoe ianao hanao ny sitrapon’Andriamanitra ary dia hanankatsakana anao izy tsy hahavita izany kanefa mahatoky Andriamanitra
Filipiana 2 :13 « Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony »
Andriamanitra manome saina :
Miditra an-tsehatra izany Andriamanitra, ary miditra ao anatin’ny olona anankiray izay nanana an’izay faniriana izay rehefa avy nanome saina Andriamanitra dia hiditra ao anatiny.
Aza adino fa ny devoly dia mpangala-tahaka maka tahaka izay ataon’Andriamanitra izy, inona moa ny zavatra nitranga tamin’i Jodasy ? tsy avy hatrany dia niditra tao anatiny ny fanahy ratsy fa hoy ny Soratra Masina hoe « ary Jodasy dia
Jaona 13 :2 « Ary raha mbola teo amin’ ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota, zanak’ i Simona, efa nomen’ ny devoly saina rahateo mba hamadika Azy »
Jaona 13 :27 « Ary manaraka izany no nidiran’ i Satana tao aminy, ka hoy Jesosy taminy: Izay ataonao dia ataovy faingana »
Ary dia niditra tao anatin’i Jodasy satana aveo izany hoe alohany hidiran’ny devoly ao amin’ny fiainan’ny olona eny izany dia manome sain aizy satria tahaka izany koa ny fomban’Andriamanitra hoe manome saina aloha Andriamanitra dia aveo miasa ao anatin’ny olona izay nomeny an’izay saina izay Izy.
Tsy izay ihany akory ny zavatra hitranga fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy izay efa niteny tamintsika hoe
Jaona 16 :13 « Fa raha tonga ny Fanahin’ ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. »
Izany hoe na dia miasa ao anatintsika aza Andriamanitra dia mbola mila ny Fanahy Masina ihany isika hitari-dalana antsika amin’ny marina rehetra. Ary tsy mitombona mihintsy izany hoe : Andriamanitra hiasa ao anatinao kanefa ianao tsy mety ho tarihan’ny Fanahy Masina, tsy mifanohitra mihintsy izy telo fa mifanaraka tsara , ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ary Andriamanitra mihintsy no hanoro hevitra anao hoe meteza ho tarihan’ny Fanahy Masina lalàna eny amin’ny fiainana eny.
Manaraka amin’izay izany no manomboka hisokatra ny atao hoe sitrapon’Andriamanitra dia manomboka mahafantatrao tsikelikely ny sitrapon’Andriamanitra.
An’iza marina moa ianao ?
Ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy tahaka ny bokotra iray ka ho tsindrina dia hoe ianao tsy manao na inona na inona fa mandray fotsiny, tsia fa ny mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra na dia amin’ny antsipirian-javatra aza dia ilaina ny fanoloranao feno ny momba anao, ny tenanao
Romana 12 :1-3 « Koa amin’ izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon’ Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’ Andriamanitra, dia fanompoam-panahy[Na: fanompoam-pivavahana]mety hataonareo izany.Ary aza manaraka ny fanaon’ izao tontolo izao; fa miovà amin’ ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’ Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina[Gr. tanteraka].Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin’ ny olona rehetra izay eo aminareo: Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina; fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain’ Andriamanitra ho anareo avy. »
Raha an’i Jesosy Kristy ianao dia tsy hitovy amin’ny fisain’izao tontolo izao manao zavatra fa manana ny sain’Andriamanitra.
A/ Fanolorana ny fiainana tanteraka ho an’Andriamanitra
Matetika alaim-panahy isika hanokatra avy hatrany hoe inona ny sitrapon’Andriamanitra dia izay teny hita ao anatin’ny baiboly dia hoe izay no arahina fa raha toa ka tsy ampy ny fanoloranao ny tenanao dia mety ho voafitakin’ny devoly ihany ianao fa nomena fanahy hendry sy fahazavan-tsaina isika mba ho fantatsika ny marina.
B/ Firaisana amin’ny Fanahy Masina, amin’Andriamanitra
Jaona 16 :13« Fa raha tonga ny Fanahin’ ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo ».
Ilaina izany izaho sy ianao mifankazatra sy miray am-po amin’Andriamanitra, raha misy olona mifankatia dia tsy miala ampony ny anaran iny olona iny
Dia tahaka izay mihitsy izany isika sy Jesosy, ny atao hoe mivavaha ka aza mitsahatra dia tsy hoe any ampiangonana sy ao antrano, fifandraisana ao anaty ao amin’ny Tompo mandrakariva
Misaintsaina ny momba ny TOmpo, ny dianao afaka haheno ny Tompo isika, i Paoly Apostoly dia nanenjika an’i Jesosy fa mba naheno ny feon’i Jesosy ho azy ihany izy
Na dia maika aza isika hamantatra ny sitrapon’Andriamanitra dia aoka ho fantatrao fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany araka ny tokony ho izy amin’ny antsipirihan-javatra ary tsy tara amin’izay zavatra ataony Andriamanitra fa izaho sy ianao kosa mila mahay miandry.
Salamo 27 :14 « Miandrasa an’ i Jehovah hianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’ i Jehovah »
Eto izany dia rehefa avy nanolotra ny fiainanao ianao an’i Jesosy, izany hoe ilay manolon-tena anie tsy hoe akory hanao mpiandry na hanao ny asan’Andriamanitra dia tsy hiraharaha ny hafa intsony ianao fa io fiainanao andavan’andro io dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra ary aoka ho voatokana ho an’i Jesosy izany fiainanao izany mba tsy hidiran’i satana na hamitahany anao ho latsaka ianao fa efa manan-tompo ianao ary ny tomponao dia lehibe indrindra ary Tompo manafaka fa tsy sanatria akory manandevo.
1/ Fiandrasana an’Andriamanitra
Efa misy sitrapon’Andriamanitra izany efa nanontanianao ny Tompo ary niandrasanao izay no atao hoe miandry an’Andriamanitra fotsiny amin’izao.
Isaia 30 :18 « Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindrany fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin’ ny avo Izy mandra-piantrany anareo, fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah; Sambatra izay rehetra miandry Azy »
Andriamanitra dia mitaiza antsika amin’izany hoe faharetana izany, rehefa tafiditra ao anatin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao dia misy ny faharetana amin’ny karazan-zavatra ary tsy mitovy ny fatran’izany faharetana izany
Eto na dia manao ny sitrapon’Andriamanitra aza dia mbola misy ihany ny fiandrasana an’Andriamanitra amin’izay sitrapon’Andriamanitra ary io no mifanandrify amin’ilay hoe
Isaia 40 :31 « Fa izay miandry an’ i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka. »
Izany hoe tsy afoin’Andriamanitra mihitsy ny olona iray raha tena hoe vonona ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra izy ary tokony ho fantatsika fa Andriamanitra dia vonona hiasa eny amin’ny fiainantsika tsirairay avy eny.
Ilaina ny manavaka ny sitrapon’Andriamanitra, misy 4 mitombona foana na inona na inona sitrapon’Andriamanitra tianao ho fantarina dia ireto 4 ireto
1korintiana 6 :12 « Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona »
Mila mametraka ny fanontaniana isika hoe mahasoa antsika ve ? manandevo ve ?
Rehefa ny zavatra anankiray no manan-devo anao dia tsy tafiditra anatin’ny sitrapon’Andriamanitra intsony ianao amin’izay eny fa na dia heverintsika fa zavatra tsara ny zavatra ataontsika kanefa manandevo antsika dia efa hivelan’ny sitrapon’Andriamanitra isika amin’izay lafiny izay
Fa Andriamanitra mitaiza antsika ho ami’ny fahafahana
1korintiana 6 :19-20 « Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’ Andriamanitra? ka tsy tompon’ ny tenanareo hianareo.Fa olom-boavidy hianareo, koa dia mankalazà an’ Andriamanitra amin’ ny tenanareo »
Izany hoe avereno ao amponao fa efa olom-boavidin’i Jesosy ianao ary lafo dia lafo ny sandan’izany ary tsy ho voavidin’ny vola aman-karena sy ny diamondra izany fa ny ra soan’i Jesosy Kristy tsy misy fitaka sy ota sy tsy misy tsiny izay no nividianana ahy sy ianao
Ka averimbereno eo amin’ny fiainana fa ny anisany hamantarana ny sitrapon’Andriamanitra dia atoavy hoe « raha olom-boavidin’i Jesosy Kristy ve izaho dia ity zavatra ity no ataoko ? »
Ary eo dia ho fantatrao hoe ity zavatra ity efa nanandevo sy nampijaly ahy ary izaho efa nafahan’i Jesosy Kristy dia tsy mety intsony aho
3/ Ny fahafahana
1korintiana8 :9 « Nefa tandremo, fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafintohinana ho an’ ny malemy »
Ny malemy dia ireo kely finoana, ho an’ireo mpiara mivavaka amiko ve ny zavatra ataoko ? mety ampihemotra azy ve ny ataoko ? mety tsy ampiverina azy intsony aty ampiangonana ve izany ?
Mila mitandrina ny fomba hanantanterahina ny sitrapon’Andriamanitra isika izany.
4/ Manome voninahitra an’Andriamanitra ny zavatra atao
1 korintiana 10 :31 « Koa amin’ izany, na mihinana na misotro hianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’ Andriamanitra izany rehetra izany. »
Ny kristiana dia afaka manao ny zavatra rehetra izy fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe :
Mahasoa ve izany ? manandevo ve izany ? manafitohana ny malemy finoana ve izany ? Misy voninahitr’Andriamanitra ve izany zavatra ataony izany ?
Raha ataonao mandrakariva eo amin’ny fiaiananao ianao dia voavaha daholo ny olana hoe : hisotro toaka ve ? hifoka sigara ve ? Hanao fanantanjahantena ve ?
Rehefa hitanao ireo hoe mahasoa, tsy manandevo, tsy mahatafintsoina ny malemy fanahy ary misy voninahitr’Andriamanitra. Ny Tompo dia hampahalala anao ny sitrapony.
Rehefa hanantanteraka ny sitrapon’Andriamanitra ianao dia fanam-pahankevitra manao ahoana no hanantanterahanao azy ?
- Tantaran’i Gideona
Vakio nyMpitsara 6 :25-28
Mampatahotra ny zavatra nampanaovin’Andriamanitra an’i Gideona satria an’ny rainy mihintsy no nasainy nokapainy sy nazerany, fa na natahotra aza izy dia nokapainy tamin’ny alina izany sampy izany
Na manao ahoana dia nankato an’Andriamanitra izy
- Tantaran'i Mosesy
Hebreo 11 :25-26 « Nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin’ ny olon’ Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin’ ny fahotana, nanao ny fanaratsiana an’ i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan’ i Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa izy »
Aleon’i Mosesy nifidy an’i Kristy amin’ny fitsinjovan’ny ny ho aviny.
2 Timoty 4 :10 "fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nankany Tesalonika; Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia"
Nisy inona tany Tesalonika ?
« fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nankany Tesalonika; Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia »
Diso tamin’ny fanampahan-keviny izy, ny fiainany izy (tia izao fiainana izao izy)
Otrany mety sy otrany marina ny nataony
Raha mandà ny ankato an’Andriamanitra ianao ami’ny torolalana omeny manoloana ny zavatra eo amin’ny fiainanao dia atoanao ahoana moa ny handray indray ny toro lalana vaovao raha ny nomen’Andriamanitra anao teo aza tsy nankatoavinao ?
Ny sitrapon’Andriamanitra dia asehony ami’ny alalan’ny Soratra Masina, fa ny fankataovana no tena zava-dehibe ho ahy sy ho anao.